kuhlanganiswe imishini yelayisi eqhutshwa yinjini yedizili,Umshini wokugaya irayisi we-SB
1.Lo mshini wokugaya ubhontshisi usebenzise indlela ekhethekile yokondla
2.lolu hlobo olubheke kude lomshini wethu wokuxubha welayisi ungagcina izinga lokushisa eliphansi lokugaya
3.Umshini wokuxubha welayisi ohlangene onesakhiwo esilula ,Kulula ngomsebenzisi ukufaka esikhundleni sezingxenye ezisele
4.ukuhlanganiswa kwerayisi okuhlanganisiwe kunganciphisa izinga lokuphuka kwerayisi futhi lenze nelayisi libe mhlophe.
5.lo mshini we-VTSB uchungechunge welayisi uneroller yerabha eqinile
6.kuba okuzenzakalelayo ukucutshungulwa VTSB uchungechunge kuhlanganiswe irayisi umshini isigayo
8.lo mshini oxutshwe wokugaya irayisi ungaqhutshwa yinjini yedizili
Imininingwane yomkhiqizo womshini we-VTSB welayisi
Umshini wokugaya irayisi weVTSB unokubukeka okuhle, isakhiwo esihlangene kanye nokusebenza okulula nokuphephile. Umshini wokuxubha welayisi ohlanganisiwe uxazulule inkinga ethile yeminye imishini efanayo, njengamakhoba amalahle, ukungcoliswa komoya kumashophi.Besides, lo mshini wokugaya irayisi we-SB ufakelwe amadivayisi wamakhaza, kumakhoba akhipha futhi kumakhoba akuqhoboza.Umshini wokuxubha welayisi ohlangene ungazenzakalelayo uhlukanise amakhoba elayisi eliqediwe futhi usebenzisane ne-paddy irayisi husker,umshini we-rice destoner ukusetha okuphelele isithombo selayisi. bese ucubungula i-paddy ibe ilayisi eliqediwe kube kanye. Ngakho-ke ukukhiqizwa okuqediwe kunezimpawu ezilandelayo: irayisi elimhlophe eliningi,ilayisi eliqediwe eliphelele lokushisa eliphansi,ama-husks amancane ,amakhoba amahle, ukuphuma okukhulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, futhi kulula ukugcina i-workshop ihlanzekile.SB umshini wokugaya irayisi ohlangene ngempela uwumshini ofanele wokugaya irayisi we-paddy irayisi processing.this umshini wokugaya irayisi ohlangene ungaqhutshwa ngenjini kagesi nenjini yedizili.
Izici zomshini wokuxubha welayisi ohlangene
Lo mshini wokugaya ubhontshisi usebenzise indlela ekhethekile yokondla ,izingxenye zokugaya eziphambili zenziwa ngerabha roller.it zingathuthukisa umthamo womshini.
2.Isivuno esikhulu sokugaya
Umshini we-SB ohlangene welayisi ungafakwa ezinhlotsheni ezi-brown brown paddy.include irayisi ebukhali nerayisi eyindilinga.Rubber roller ne-iron roller ingasebenza .
3.Izinga lokushisa eliphansi lokugaya
lolu hlobo olubheke kude lomshini wethu wokuxubha welayisi ungagcina izinga lokushisa eliphansi lokugaya lisebenza .kodwa lo mshini onokugeleza kwe-flow.it unganciphisa
4.Izinga eliphansi lokuqhekeka
Kuqhathaniswa nomshini owodwa we-iron roller ohlangene,i-paddy ngemuva kwe-roller roller rolling,kuzoba lula kakhulu kwe-iron ruller hulling.combined irayisi kunganciphisa izinga lokuphuka kwerayisi futhi yenze irayisi ibe mhlophe.
5.I-roller enjoloba enjoloba
Uhlelo lokuphrinta olugudluzwa kabili ukuze kuthuthukiswe impilo yensiza ehlanganisiwe .I-roller yerabha ingathambisa isikhumba esinsundu bese i-iron roller ikwazi ukukhonkotha nerayisi emhlophe.Isistimu yokufaka kulayini owodwa odlulayo.
Umshini welayisi we-SB wokugaya ubeke irayisi emgodini wokudla,khona-ke irayisi elimhlophe namakhoba kuzophuma lapho kuphuma khona izinto ezihlukile.Emuva kokudonsa i-paddy kudlule i-roller yerabha bese kufika ku-iron roller ,irayisi namakhoba kwakungaphandle ngezindlela ezihlukile.
7.Kulula ukubuyisa izingxenye zesikhala
Umshini wokuxubha welayisi ohlangene onesakhiwo esilula ,Kulula ngomsebenzisi ukufaka esikhundleni sezingxenye ezisele .
8.Udizili ushayela isigayo selayisi
Udayi welayisi odizili ungahanjiswa ngodizili ,Injini kaphethiloli ,Injini kagesi .diesel kanye nomshini wokugaya injini we-petrol ilungele izindawo lapho ugesi uswele khona.
Umgomo wokusebenza we-SB ohlangene womshini wokugaya irayisi
Okokuqala i-paddy ithululelwa ku-hopper yokudla yomshini we-mill mill ohlangene, futhi ahlukaniswe kusukela ngotshani ngesilo sokudlidliza. Ngemuva kwalokho i-paddy ehlanziwe idlula ngedivaysi ngokusebenzisa i-flash board ye-hopper yokususa ama-sundries, ngemuva kwalokho zithwalwa nge-roller feed kuya ezikhumulweni ezimbili zerabha-roller for husking. I-adaptha ye-flux yomshini we-SB ohlangene wejubane ulungisa ijubane lokudla. I-roller esheshayo ne-roller engatheni ejikelezayo ibuyela emuva nomehluko we-3.6mps wejubane lomugqa, futhi isilinganiso sabo sokujikeleza si 1:1.35. Izinga le-husking lingaphezu kwe 95%, Ukucaca phakathi kwama-roller amabili kulungiswa ngumshini wokucacisa okuthile. Ngemuva kokuxwaya, umakhoba uvunguza amakhoba kule ngxube ngaphandle komshini. I-paddy e-runtish iphuma emshinini ohlangene wokugaya irayisi ophuma epanini le-paddy, nelayisi elinsundu lingena egumbini lokugaya lokugaya, okokugcina kuphuma lapho kuphuma khona irayisi njengokuqeda irayisi.
Ngenkathi yokugaya umshini we-VTSB welayisi, isivunguvungu esinamandla somoya sishayeza umoya njalo ungene maphakathi nendawo yomgodi omkhulu ukupholisa igumbi lokugaya futhi uqiniseke ukuthi ilayisi eliphelile licacile futhi likhanya, kuphuke kancane, futhi wenze amakhoba akhumule kahle. Isisetshenziswa esisetshenziselwa amandla adonsela phansi eduze nendawo ethengisa irayisi bese ulungisa okumhlophe kwelayisi, umkhohlisi omuhle uxoshwa kumshini wokugaya udizili ngokusebenzisa isihlungo sehexagon.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini we-mill wokuxubha ohlangene
Imodeli I-VTSB5 I-VTSB10 I-VTSB30
(kg / h) 500~ 600 700~ 900 1100~ 1500
Ubukhulu be-Rubber roller
ividiyo yomshini wokugaya uhlangene ohlangene
Xhumana Nathi Ngomshini we-VTSB welayisi